जलवायु परिवर्तनको ख़तरा झेलिरहेको अन्टार्टिकाको यो सौन्दर्यता| Nepal Pati
मन्त्रीपरिषदबाट कस्ता निर्णय भए ? निर्णय सहित
ऐन पारित हुने वित्तिकै कर्मचारी समस्याको हल हुन्छ : मन्त्री पण्डित
मेलम्ची खानेपानीको बाँकी काम छिट्टै अघि बढ्छ : मन्त्री मगर
भारतीय माओवादीद्वारा निर्वाचन अधिकारीको हत्या
ऐन संशोधन प्रति मानवअधिकार समाजको आपत्ती
बन्दुकधारी समुहद्वार बसमा यात्रारत १४ जनाको हत्या
जलवायु परिवर्तनको ख़तरा झेलिरहेको अन्टार्टिकाको यो सौन्दर्यता (फोटोफिचर)
सोमवार, चैत्र २६, २०७४
जलवायु परिवर्तनको ख़तरा झेलिरहेको अन्टार्टिकाको यो सौन्दर्यता !
त्यहाँ बस्ने जीवको बारेमा जान्नको लागि सन् २०१८ को शुवातमा रोयटर्सको फ़ोटो जर्नलिस्ट अलेक्ज़ेंडर मेनेघिनीले यो सुन्दर ठाउँको यात्रा गरेका थिए ।
मेनेघिनीको यो यात्राको आयोजना ग्रीनपीसले गरेका थिए । किनभने यूरोपीयन संघलाई एक प्रस्तावको बारेमा जानकारी दिन सकियोस् । यो प्रस्तावको आधारमा अन्टार्टिकामा एक संरक्षित क्षेत्र बनाउन माग गरिरहेको छ । किनभने त्यसक्षेत्रमा समुद्री जीवन बाच्नसकोस् ।
चार दिन लामो यात्रा पछि मेनेघिनी हिउँले ढाकेको महाद्वीपमा पुगे, जहाँ उनले व्हेल, पेंग्विन लगाएतका समुद्री जीव देखाई दिए ।
यस प्रस्तावित वेडल सी मरीन प्रोटेक्टेड एरियामा १.१ मिलियन स्वायर माईल क्षेत्र हुनसक्छ । यसमा व्हेल, सील, पेंग्विन र विभिन्न जातका माछाको प्राकृतिक बासस्थान समावेश हुन्छ । यदी यस प्रस्तावमा ध्यान दिइयो भने यो दुनियामै सबैभन्दा संरक्षित क्षेत्र हुने छ ।
चिलीको पुंटा एरेना देखि शुरु गरेपछि यो टीमले प्राकृतिक वन्यजीवनमा जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र माछा उद्योगको प्रभावकाबारेमा अध्ययन गर्न सुरु गरेको छ ।
यस मिशनको नेतृत्व गर्ने टाम फोरमेन भन्छन्, ‘अन्टार्टिका अहिले पनि अन्टार्टिका संधिको अनुसार संरक्षितछ तर यसको वरपरिको क्षेत्र दुरुपयोग दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका छ । यसका धेरै किसिमका प्रजातिको लागि आवश्यक यस क्षेत्रलाई संरक्षित गर्ने मौका हातबाट जान दिन सकिदैंन ’ । पेंग्विनको अलावा यस समूहले हेलिकप्टरबाट सीलको देख्नेको मौका मिलेको थियो ।
यो समुहले कर्वरविले द्वीप, हाफ़ मून खाड़ी, डेंको द्वीप, नेको बंदरगाह र हीरो खाड़ीको पनि यात्रा गरेको थियो ।
ताइवानमा भूकम्प, जापान र फिलिपिन्समा धक्का महसुश
हुवालियन । ताइवानमा हुवालियन प्रान्तको तटीय क्षेत्...
पेरुका पूर्व राष्ट्रपतिले गरे आत्महत्या
लिमा । पेरुका पूर्व राष्ट्रपति एलन गार्सियाले गोली...
चिहान खोतलेर मानव अस्थिपञ्जरको लुटपाट
कराकस । राजनीतिक र आर्थिक सङ्कट खेपिरहेको भेनेजुएल...
मध्यपूर्वमा अमेरिकी सेनाहरुले आतंकवाद फैलाएको ईरानी सांसदहरुको आरोप
तेहरान। इरानी सांसदहरुले मंगलबार मध्यपूर्वको अमेर...
चर्चित सांस्कृतिक पर्व ‘बिस्का: जात्रा’ किन मनाइन्छ ?
भक्तपुर । विशेषत: भक्तपुरका धापासि, तोखा र थिमिमा बार्षिक रूपमा मनाइने चर्चित...
प्रचण्ड र लेनिनको पश्चिम भ्रमण: संजाेग कि नियोजित !
नेपालको राजनीतिक कालखण्डमा थुप्रै व्यवस्था बदलिए तर जनताको अवस्था बदलिएन । जनताल...
खिचातानीमा वाम एकता !
मुलुक वामपन्थीमय छ । मतादेश मार्फत प्राप्त सुविधानजनक अंकगणित सहित सरकारको नेतृत...
‘विष्णु लीला’ छताछुल्ल, नेकपा संकटमा !
नेकपा राजनीतिमा नम्र, भद्र, स्वच्छ, कार्य कुशलताले भरिपुर्ण, लोकप्रिय छव...
लामो काम !
सुमनले केहि महिना काम गरे पश्चात छुट्टी पाउन थाले । सुमनको लागि छुट्टीको अर्थ सा...
काठमाडौं । विश्व चर्चित फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग इन्डियन प्रिमियर लिग(आईपीएल) भार...
क्वेटाको तरकारी बजारमा बम बिस्फोट, १६ जनाको मृत्यु, ३० घाइते
क्वेटा । पाकिस्तानको बलोचिस्तान प्रान्तको राजधानी क्वेटामा आज(शुक्रबार) बिहान भ...
टोकियोका एक प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकालाई यसरी गरे प्रेम प्रस्ताव, बनिदियो विश्व रेकर्ड
काठमाडौं । एउटा अनौठो प्रेमकहानी पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको छ । जापनका एक यु...
अन्तरिक्षमा रकेट लानसक्ने विश्वकै ठुलो विमानको परीक्षण उडान सम्पन्न
क्यालीफोर्निया। विश्वको सबैभन्दा ठुलो विमानले क्यालीफोर्नियामा आफ्नो पहिलो परीक्...